ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): လူမျိုးနှင့်နိုင်ငံသား
`ဘာလူမျိုးလဲ´`ဘာနိုင်ငံသားလဲ´ဒီမေးခွန်းတွေကို အပြင်ရောက်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကြားဖူးနေကျ မေးခွန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် နေထိုင်ခွင့်ပုံစံကို အမျိုးမျိုးခွဲထားတဲ့ စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံမှာ ပိုကြားရပါလိမ့်မယ်။ အချို့လူတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားကိုပြောင်းယူသွားကြတဲ့လူတွေ အများကြီးပါ။ အပေါ်ယံမှာကြည့်ရင်တော့ `ဘာကြောင့်ပြောင်းကြတာလဲ´ဆိုသော မေးခွန်းကို နားမလည်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ စင်္ကာပူရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံစည်းကမ်းအရ နေထိုင်ခွင့်ရထားတာချင်း မတူရင် စရိတ်တွေအားလုံးက မတူတာတစ်ချက် ၊ နိုင်ငံသားနှစ်ခုကို အတူတကွ ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိတဲ့အချက်ရယ်ကြောင့် ပြောင်းသွားကြတာလို့ မြင်မိပါတယ်။ နေထိုင်ခွင့်တွေဖြစ်တဲ့ Student Pass ၊ Work Permit ၊ S Pass ၊ Permanent Resident & Singapore Citizenship အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုတိုင်းမှာ စရိတ်တွေအားလုံးကလည်း မတူကြပါဘူး။ အကွာခြားဆုံးကတော့ စင်္ကာပူလူမျိုးခံယူထားသူနှင့် အခြားနေထိုင်ခွင့်ကိုရထားသူတွေအားလုံးပါ။ အိမ်ဝယ်စရိတ် ၊ ဆေးကုသစရိတ် ၊ ကျောင်းစရိတ် အစရှိသဖြင့် အားလုံးကွာခြားပါတယ်။ ကွာခြားပုံခြင်းက အတော်ကွာခြားတာကိုလည်း သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာ ကွာခြားချက်ကတော့ စင်္ကာပူလူမျိုးခံယူလိုက်ရင် မြန်မာသံရုံးကိုနှစ်စဉ်ပေးဆောင်ရတဲ့ အခွန်စရိတ်များ မရှိတော့ခြင်းပါ။ စင်္ကာပူနှင့် မြန်မာပြည် နှစ်ဘက်လုံး အခြေအနေတွေကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ပန်းရောင်ကဒ်ကလေးကို ပြောင်းလဲသွားကြတာ များပါတယ်။ စင်္ကာပူရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ စံနစ်ကလည်း လူတွေကို နိုင်ငံသားပြောင်းလဲဖို့ အခွင့်အရေးရရင် ပိုမိုတိုက်တွန်းနေသလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ `ဘာနိုင်ငံသားခံယူထားလဲ´ဆိုတဲ့ မေးခွန်းထက် `ဘာလူမျိုးလဲ ၊ ဘာတွေလုပ်နေလဲ ၊ ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓါတ်ရှိလဲ´ဆိုတာကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံသားခံယူထားလဲက ကျွန်မအတွက်တော့ သိပ်အရေးမကြီးလှပါဘူး။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာကိုပဲ ကျွန်မက ကြည့်တတ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ နအဖ အသိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးက မြန်မာပြည်သူလူထုကို နှိပ်စက်နေကြတာထက် မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့တဲ့ မြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အခြားလူမျိုးခြားပဲဖြစ်ဖြစ် ..မြန်မာပြည်ကောင်းဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေကြရင် .. အဲဒီလူမျိုးတွေကို ပိုမိုကြိုဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ မြန်မာအသိုင်းဝိုင်းက မြန်မာလူမျိုးအချို့က သဘောထားသိပ်မကြီးကြဘူး ။ နိုင်ငံသားနှစ်ခုကို အတူကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိတဲ့ စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူထားပြီး မြန်မာ့အရေးတွေ တတ်နိုင်သမျှ ၀င်ရောက်ကူညီရင် အသိမှတ်သိပ်မပြုချင်သူတွေ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအတွေးအခေါ်က သိပ်နောက်ကျလွန်းပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားကိုခံယူထားပြီး မြန်မာ့အရေးကို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်နှင့် တကယ်လုပ်နေသူတွေကို ဘာမှစွန့်လွှတ်ခြင်း ၊ ခံရခြင်းတွေ မရှိဘူးလို့ အပေါ်ယံသတ်မှတ်သူတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့ အဲဒီလို မမြင်မိပါဘူး။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေမှာ စတေးရတာရှိပါတယ်။ သူဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက် မြန်မာ့အရေးကို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်နှင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ချိန်မှာ ယုတ်မာတဲ့စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုတွေ ဒုက္ခပေးလာရင် မြန်မာပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ထိုလူတွေအတွက် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုပါ။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း အမိမြေမှာ ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိပါတယ်။ အားလုံးဟာ မိမိရပ်ရွာဒေသနှင့်တော့ ခွဲချင်စိတ်မရှိကြပါဘူး။အချို့နေရာတွေမှာ မိမိရဲ့ မိသားစု ဘ၀အခြေအနေတွေအားလုံးနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ အရိုးစွဲနေတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟောင်းကြီးကိုတော့ ပစ်ပယ်သင့်ပြီလို့ ကျွန်မယူဆပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီလိုပြောတော့ `မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာလူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလျော့နည်းသွားမှာပေါ့´ဆိုပြီး ပြန်တိုက်ခိုက်ချင် တိုက်ခိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ စာရွက်ပေါ်က ပြောင်းလဲပေါ်တစ်ခုဟာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မရတာ ၊ မဲပေးမရတာကလွဲရင် ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ လုံးဝဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အခြေအနေ ၊ ဖြစ်တည်နေပုံတွေက မတူညီကြပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခြားနိုင်ငံသားခံယူထားပြီး မြန်မာပြည်အတွက် မျိုးချစ်စိတ်နဲ့လုပ်ကိုင်ပေးနေတယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ လေးစားအသိမှတ်ပြုပေးရမှာပါ။ စင်္ကာပူတင်မဟုတ် နှစ်နိုင်ငံသားခံယူလို့မရတဲ့ အခြားနိုင်ငံမှာ လူမျိုးခြားနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ မြန်မာတွေအနေနှင့်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဘ၀အခြေအနေတွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ လူတွေအားလုံးရဲ့မတူညီတဲ့ ဘ၀အခြေအနေတွေပေါ်မှာ စာတန်းတစ်ခုတည်းနဲ့ ပုံသေသွားသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အမြင်ကျယ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးကိုစာနာ ၊ တရားမျှတမှုကိုမြတ်နိုး ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အမှန်တကယ်ကျင့်သုံးမည့်အစိုးရဟာ အခြားနိုင်ငံသားခံယူထားသော မြန်မာများကို တစ်နေ့ မြန်မာပြည်မှာ `ပြည်တော်ပြန်´များအဖြစ် ပြန်လည်လက်ခံမယ်ဆိုတာ အခြားနိုင်ငံသားခံယူထားသူအားလုံးအတွက် ကျွန်မ ယုံကြည်မိပါတယ်။`မြန်မာဟာ မြန်မာပဲ´ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အားလုံးဟာ ဘယ်နိုင်ငံသားခံယူထားသည်ဖြစ်စေ မြန်မာပါလို့ ဖြေကြတာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးကိစ္စတွေအတွက် နိုင်ငံတကာလှည့်လည် ခရီးသွားချိန် ၊ အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် ကူးနေရချိန်တွေမှာ လေဆိပ်တစ်ခုကိုဝင်လို့ မြန်မာအနီရောင်ပါ့စ်ပို့ကြောင့် ဘေးဖယ်တန်းစီခံနေရတာတွေ ၊ ပိုမိုစစ်ဆေးတာတွေ ၊ ကြည့်ကြတဲ့မျက်လုံးတွေရဲ့အရောင်တွေအားလုံးအောက်မှာ မြန်မာလူမျိုးအားလုံးခံစားချက်တွေကတော့ တထပ်တည်းဖြစ်နေမှာပါ။ `မြန်မာဟာ မြန်မာပဲ ၊ မြန်မာပြည်မှာပဲ နေရမယ်´ စကားကို အမှန်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးချင်ရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက် မြန်မာလူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးနှင့် အခြားနိုင်ငံသားခံယူထားသော မြန်မာလူမျိုးများအားလုံးမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိနေကြောင်း မမေ့မလျော့ လုပ်ဆောင်ကြဖို့က အများကြီးပိုအရေးကြီးပါတယ်။
yeah you are right. Action speaks louder than words.
Saung Yune La (aka) Way
ကျွန်မရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ `ဘာနိုင်ငံသားခံယူထားလဲ´ဆိုတဲ့ မေးခွန်းထက် `ဘာလူမျိုးလဲ ၊ ဘာတွေလုပ်နေလဲ ၊ ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓါတ်ရှိလဲ´ဆိုတာကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံသားခံယူထားလဲက ကျွန်မအတွက်တော့ သိပ်အရေးမကြီးလှပါဘူး။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာကိုပဲ ကျွန်မက ကြည့်တတ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ နအဖ အသိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးက မြန်မာပြည်သူလူထုကို နှိပ်စက်နေကြတာထက် မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့တဲ့ မြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အခြားလူမျိုးခြားပဲဖြစ်ဖြစ် ..မြန်မာပြည်ကောင်းဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေကြရင် .. အဲဒီလူမျိုးတွေကို ပိုမိုကြိုဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ မြန်မာအသိုင်းဝိုင်းက မြန်မာလူမျိုးအချို့က သဘောထားသိပ်မကြီးကြဘူး ။ နိုင်ငံသားနှစ်ခုကို အတူကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိတဲ့ စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူထားပြီး မြန်မာ့အရေးတွေ တတ်နိုင်သမျှ ၀င်ရောက်ကူညီရင် အသိမှတ်သိပ်မပြုချင်သူတွေ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအတွေးအခေါ်က သိပ်နောက်ကျလွန်းပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားကိုခံယူထားပြီး မြန်မာ့အရေးကို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်နှင့် တကယ်လုပ်နေသူတွေကို ဘာမှစွန့်လွှတ်ခြင်း ၊ ခံရခြင်းတွေ မရှိဘူးလို့ အပေါ်ယံသတ်မှတ်သူတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့ အဲဒီလို မမြင်မိပါဘူး။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေမှာ စတေးရတာရှိပါတယ်။ သူဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက် မြန်မာ့အရေးကို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်နှင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ချိန်မှာ ယုတ်မာတဲ့စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုတွေ ဒုက္ခပေးလာရင် မြန်မာပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ထိုလူတွေအတွက် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုပါ။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း အမိမြေမှာ ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိပါတယ်။ အားလုံးဟာ မိမိရပ်ရွာဒေသနှင့်တော့ ခွဲချင်စိတ်မရှိကြပါဘူး။သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့အတွေးအခေါ်ပါဘဲ ညီမလေးရေ
Sis Linlet!! Wherever you are and whoever you are such as from Burmese citizens to US citizens or European citizens or other citizens, then you don't forget for Burma and do for Burma from where you are living today. That already show you are Burmese and you love Burma. We can't blame to those who don't do for Burma. Please, don't concern too much about third country citizenship and other country citizenship for change and don't worry to those who say that thing regarding the accepting other nationals. We should try to focus only inside for change. We outside Burmese could just force to pressure on SPDC for change timely with inside movement.P.S: one thing i would like to advise you is you should try to creat new blog from other free making blogs which could not banned by SPDC. I am also trying to creat it. ( I can't use ZawGyi font outside of my apartment )
ကမ်ဘောဒီးယား..ဗီယက်နမ် အိန္ဒိယ ကိ.ပြည်တော်ပြန်များကြောင့် တိုင်းပြည် စီးပွါးရေးတိုးတက်လာတယ်.ဘရိန်းဂိန်း ဖြစ်လာရတယ် လို့ ဘီဘီစီ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ရလာတဲ့တစ်နေ့မှာုမြန်မာနိုင်ငံအနေ နှင့် ဘရိန်းဂိန်း ပြန်ဖြစ်လာပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းနေရမှာပဲ။ စီတီဇင် ၂ ခု ခံယူခွင့်မရှိတဲ့ စင်္ကာပူထက်.. အမေရိကန်.သြစတေးလျ စတဲ့ စီတီဇင်အများခံယူခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံ ကိုပို စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
I'M VERY LIKE YOURS IDEAS.SAME TO YOU
People who participated in the Burmese Embassy's I...